दुबईमा रहेका सविता भण्डारीको श्रीमानको साथिको ग’म्भीर खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
June 17, 2021 AdminLeaveaComment on दुबईमा रहेका सविता भण्डारीको श्रीमानको साथिको ग’म्भीर खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
यसै बीच दुबईमा रहेका सविता भण्डारीको श्रीमानको साथि मिडियामा आएका छन। उनि सबिता भण्डारीको श्रीमानको परिवारसंग विगत १५ वर्ष देखि संगै बसेको बताउछन । उनि मिडियामा आएपनि उनले आफ्नो नाम भने गोप्य राख्ने बताएका छन । उनले आफुलाई चित्त नबुझेको कुरा निजगड न्युज नामक युट्युब च्यानलमा पोखेका हुन् । भिडियो हेर्नुहोसः